Goobaha hurdada ee ugu halista badan dunida ! - Xogside
FIQI oo weerar ku qaaday Farmaajo – Dhiigga dadka ayuu fasaxay…
AMISOM oo si kulul uga jawaabtay eedeyntii Ahlu Sunna Waljamaaca
Home WARARKA CAALAMKA Goobaha hurdada ee ugu halista badan dunida !
Goobaha hurdada ee ugu halista badan dunida waa kuwo ay dad badani jecel yihiin inay dalxiisaaan waxaana ka mid ah, Hoteel la aasaasay sanadkii 1989, oo ah hudheelkii ugu horreeyay ee adduunka laga sameeyay baraf.Huteelkani waxa ku yaalla tuulada Joksgar ee dalka Iswiidan,
Previous articleBasaaskii Bariga Dhexe Taariikhda Ka Sameeyay!
Next articleDuufaanka Badda Iyo Khurafaadka Ku Lammaana!
Sarkaalka ugu sareeya ciidamada Maraykanka oo afka furtay ka dib tijaabadii gantaalka aan laga hortagi karin ee Shiinaha
FIQI oo weerar ku qaaday Farmaajo – Dhiigga dadka ayuu fasaxay...